Wiil iyo gabar walaalo ah oo caawa lagu diley magaalada Muqdisho - Jowhar somali news leader
By Master	 Last updated Dec 2, 2021
Wiil iyo gabar walaalo ah oo la kala oran jirey Zakariye Maxamuud Kalafoge iyo Sowdo Maxamuud Kalafoge ayaa caawa lagu diley bartamaha magaalada Muqdisho kadib markii uu rasaas ku furay Mooto Bajaaj ay saarnaayeen askari ka tirsan ciidamada dowlada.
Wararka ayaa sheegaya in wiilka iyo gabadha la diley inay ku sii jeedeen maqaayad laga cunteeyo si ay raashin ugu soo iibiyaan gabar ay walaalo yihiin oo ku jirtey isbitaalka Yerdemeli ee magaalada Muqdisho.
Lama oga sababta kaliftey in rasaas lagu furo mootada ay saarnaayeen labada walaalaha ee geeriyooday.
Guddiga Abaalmarinta Nobelka oo ugu baaqay Abiy Ahmed inuu…
Madaxweynaha Puntland oo u magacaabay Guddoomiyaha cusub…
Allaha u naxariistee Zakariye Maxamuud Kalafoge ayaa ka mid ahaa dhalinyarada dhamaysatay waxbarashada jaamacada sida ay sheegeen dhalinyaro ay saaxibo ahaayeen.
Dilka labadan walaalaha ah ayaa imanaysa waxka yar 24 saac kadib markii saddex wiil oo walaalo ah ay ku dhinteenmagaalada Beledweyne kadib markii madfac uu ku habsaday gurigooda oo ku yaal xaafada Howlwadaag ee magaalada Beledweyne.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay ciidamada Booliska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir.
Rooble;”Xukuumadu waxay ku dhaqmeysaa siyaasad ku saleysan maslaxadda Ummadda…
Xilliga Doorashada guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka oo la shaaciyay
Soomaaliya oo ka mid noqotay 11 dal oo bixin waayay Qaaraanka Qaramada Midoobay
The UN calls on Mali’s transitional government to present the election…
hanad	 Jan 13, 2022
Kazakhstan: Did an “anti-terrorist” operation hide…
Russia sees no reason to resume talks on Ukraine crisis, threatens…
Taiwan’s Foreign Minister calls China’s military threat…